Omume ọchịchị ọhụrụ na Zimbabwe: Dr. Walter Mzembi na Nelson Chamisa
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » News » Omume ọchịchị ọhụrụ na Zimbabwe: Dr. Walter Mzembi na Nelson Chamisa
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Akụkọ mkpakọrịta • News • ndị mmadụ • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche • Akụkọ kacha ọhụrụ na Zimbabwe
Nelson Chamisa bụ onye isi otu Movement for Democratic Change, na Zimbabwe nke ya na onyeisiala Emmerson Mnangagwa na-ese okwu maka ntuli aka nke 2018. O nwetara 43% nke votu mana o kwuru na o nwetara 56%. Ọ bụ naanị Courtlọikpe Iwu kwuru maka esemokwu ahụ nke kpebiri Emmerson Mnangagwa.
Aha Dr. Walter Mzembi, onye ndu ndọrọ ndọrọ ọchịchị a ma ama na Zimbabwe na onye agha nke njem na njem na-apụta ọzọ. Mzembi nọ na mba ọzọ na South Africa.
Ndị Zimbabwe na-achọsi ike na ndọrọndọrọ ọchịchị na-aga n'ihu na-abawanye n'usoro mmepe kwesịrị ekwesị, na naanị nke a nwere ike ime site na ijikọta ndị na-eto eto na ndị na-aga n'ihu n'ofe ndọrọ ndọrọ ọchịchị.
E nwere nkwenye zuru oke n'ime nkwekọrịta nke ọgbọ nke Advocate Chamisa na onye a na-akwanyere ùgwù bụbu Onye Ofesi na Onye njem na Gọọmentị Mugabe, Dr Walter Mzembi yiri ụdị nkwanye ugwu n'ofe ndọrọ ndọrọ ọchịchị. N'etiti onye bụbu onye ozi Mugabe, Mzembi ka bụ otu n'ime ndị isi a na-akwanyere ùgwù bụ ndị a na-enyoghị asambodo ha.
Walter Mzembi (amụrụ na 16 Maachị 1964) bụ onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị na Zimbabwe. Ọ rụburu ọrụ dị ka Mịnịsta Ofesi na Minista nke njem na njem nleta. Ọ bụ onye otu nzuko omebe iwu maka Masvingo South (ZANU-PF). Mzembi bụ onye duru ndị njem na njem nlegharị anya na Zimbabwe bụ naanị onye fọdụrụ mịnịsta nyere iwu ka a kwanyere ọchịchị Mugabe ùgwù. Mgbe ọ na-eduzi ndị njem njegharị, o doro anya na onye bụbu onye omebe iwu Masvingo South nwere mmasi na-efe efe nke mebiri ihe mgbochi nke ọdịbendị na ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'ime na n'èzí obodo ahụ.
Enwere ihe akaebe doro anya ihe kpatara Mzembi ji bụrụ ogwu na anụ ahụ Zanu PF, mgbe agha ndị agha mechara duga n'ọchụpụ onye bụbu onye isi ala Robert Mugabe, Mzembi bụ ebumnuche ED, n'ime ndị G40 niile, ọ bụ naanị ya bụ onye nọ na-eche ya n'agbanyeghị na ụlọ ikpe na-eme ka ọ dị ndụ enyemaka, ha hụrụ na ọ na-ebute mba ahụ n'anya.
Mzembi (55), gosipụtara ihe ngosipụta nke mmekọrịta onwe onye dị oke mkpa n'ịdu ọrụ dị mkpa dị otú a. O kwenyesiri ike na ụwa gbakọtara na nnukwu mmiri Victoria na 2013, hazie egwuregwu kachasị na Zimbabwe, egwuregwu ọkụ n'etiti ndị dike anyị na Brazil na 2010, wee tụpụta ihe ngosi Harare International Carnival na-adọta ọtụtụ nde ndị mmadụ n'okporo ámá nke Harare. O doro anya na nke a ga-emetụta onye ọ bụla na-agbaso kpakpando ya n'oge ahụ.
Vic Falls Carnival a ma ama bụ nwa nke mbipụta Harare ma na-adọta ọtụtụ puku kwa afọ-njedebe ruo taa. Mzembi bidoro iyi ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị ikike n'ime pati ya egwu mgbe ọ tụrụpụtara amụma njem okpukpe a na-ewu ewu nke Gọọmentị dị ugbu a chọrọ ịkpofu site na ịkatọ ya maka mmegbu nke ọfịs maka inye onyinye 2010 ihu ọha n'ihu na Pentikọstal ụka, UFI, Ph.D., ZCC mgbe ichoputara ha dika ndi otutu ndi njem nleta.
O bu ihe nwute na Onye isi ala Mnangagwa n’onwe ya bu onye obia nke nkwanye ugwu na ntughari aha nke ZCC Mbungo Masvingo nke uka a dika ulo uka okpukpe ndi njem ebe o nyefere onyoonyo TV ochoro itinye nwanne ya nwoke Walter n’ulo mkporo. A họpụtara ụka nke ememme n'oge a ka ọ bụrụ akụ na ụba njem nlegharị anya n'ihi akụrụngwa ọgbakọ ya.
Mmadu aghaghi iju ajuju a di nfe, olee ihe ojoo Mzembi, o di ka o bu Mzembi ka ya na ndi mmadu na ndi otu ochichi na-acho. Ọ bụ onye na-achọ okwu mgbe ọ na-ekwu okwu, onye na-ekwu okwu n'okwu niile, na Mahadum, Mahadum Ohio, n'etiti ha. Mzembi nwere ndị na - eso ụzọ ya nke ndị ndọrọndọrọ ọchịchị ya na-achọsi ike nke mere ya ji daa ya iji mebie ya.
Nyocha nke ụzọ nke atọ na nhọrọ, na-atụgharị anya na Kasukuwere's Tyson wabantu movement abụrụla mkpa.
Nzaghachi nke Onye isi ala na ndị otu ya na-ewepụta otu nke otu moniker G40 bụ onye iro nke steeti bụ ikpe siri ike maka ịmalite inwe mmasị na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọgbọ ugbu a na-egwu ọ bụghị naanị n'ime Zanu PF kamakwa na usoro MDC ebe ndị isi. ndokwa ọzọ na njikọta ọhụụ na-apụta ihe ịtụnanya.
Nelson Chamisa nwere akọrọ na-atarịta ụta na-adịkarị n ’ụdị otu, Douglas Mwonzora. O yikarịrị ka ọ bụ onye na-agba ume na-agba ya ume site na Thokozani Khupe na onye ọka iwu ya bụ Obert Gutu.
Mmasị nke steeti na Zanu PF, n'ihe a niile pụtara ìhè ka ọ na-achọ ime ka ike gwụ onye isi ala MDC bụ onye ajụjụ siri ike banyere ntuli aka Onye isi ala Mnangagwa post-2018 abụrụla enyí n'ime ụlọ ahụ na ịchụso mkparịta ụka n'etiti ndị isi okwu abụọ ahụ.
N'oge na-adịbeghị anya ndị Zimbabwe na-ajụ ajụjụ banyere ihe G40 bụ n'ezie, ihe kpatara Mugabe ji dozie bourgeoisie nke ọgụgụ isi a ma tụkwasị ya obi na ọ ga-anara ya kama ịbụ otu ikike ya maka nnwere onwe nke Emmerson Mnangagwa chere ihu.
Ọ bụ ihe anyị na-ahụ ugbua bụ ọdịda Emmerson Mnangagwa mere ka obodo ahụ dịrị n’otu ma mee ka akụnaụba na-aga nke ọma, ụfọdụ n’ime ihe butere aka na ntuli aka ikpeazụ nke Mugabe banyere ihe akpọrọ ọkpara ya ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ iri atọ na ise nke ọchịchị ya?
Gini mere Mugabe jiri nwee mmasi nke ikwalite Walter Mzembi na Pọtụfoliyo mịnịstrị na-ahụ maka Ofesi na-eme ka ọ bịarukwuo ya nso n'ụlọ Munhumutapa oge ọ na-ahapụ ester ya ka onye osote na onye enyemaka onwe ya na mgba chọrọ ị nweta onye nnọchi anya gọọmentị a, Walter bụ isiokwu nke ihe ojoo di na matrik nke oge a.
Ighapu ụmụ nwoke Karanga nke ezinụlọ Shumba, bụ kaadị dị egwu maka Mzembi dịka ọ dị "na-adịghị emetụ n'ahụ" onye ka si na UNWTO gbasoro ọsọ ọsọ maka ọkwa nke Secretary General.
Kedu ihe ngụkọta oge nke Mzembi n'onwe ya, ọ nwere nhọrọ ịhọrọ nnupụisi nye Onye isi ala nke nwere mmasị n'ihu ya megide ịdị n'otu òtù Karanga? Nke a ewetara anyị ebumnuche Mzembi nke Onyeisiala nke ọtụtụ ndị Zimbabwe na-agbachitere megide ọdịda pụtara ìhè site n'aka ndị agbụrụ ya ịchị obodo ahụ.
Ọ bụ ya nwoke ahụ ma ọ bụ onye ester ya mgbe nwanne ya bụ Onye nzọpụta Kasukuwere, nke amara dịka Tyson wabantu, ka mmekọrịta ọ dị n'etiti ha ga-ekwe omume maka otu ebumnuche?
Ajụjụ maka ahịa ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-ajụkwa bụ njikọta gọọmentị dị n’etiti minista na-ahụ maka mba ofesi na njem nlegharị anya Walter Mzembi na onye isi MDC Alliance, bụ Nelson Chamisa, na-eme njikọ nnukwu mmekọrịta yana ihe ndị ọzọ na-aga n’ihu iji webata ọhụụ.
Njikọ njikọ nke abụọ nwere ike iweta ọchịchị mmegide nke na-eme nke ọma na aghụghọ na omume aghụghọ.
Edere isiokwu a izizi mn Bulawayo by Elvis Dzvene